Ahoana ny fanahy haavon'ny miasa
Ny ambaratonga fantsona ny fanahy na ny fanaka haavon'ny fitaratra. Ny rindrina anatiny ny ambaratonga fantsona dia curved ambonin'ny amin'ny iray nipoaka ny curvature. Ny fantsona misy rano. Raha ny ambaratonga dia mitongilana, ireo ka manjary miboiboika ao amin'ny sehatra Tube nifindra tany amin'ny faran'ny ny haavon'ny mba hamaritana ny haavon'ny toerana. Ny lehibe kokoa ny nipoaka ny curvature ny rindrina anatiny ny Fanahy anivon'ny, ny ambony ny vahaolana, ary ny kely kokoa ny nipoaka ny curvature, ambany ny fanapahan-kevitra. Noho izany, ny nipoaka ny curvature ny fanahy anivon'ny mamaritra ny marina ny Fanahy haavon'ny. Ny fanahy ambaratonga no tena ampiasaina mba nandinika ny flatness, straightness, verticality sy marindrano toerana ny fitaovana isan-karazany fametrahana ny fitaovana sy ny milina workpieces. Indrindra rehefa nandrefesany ny verticality, ny andriamby ambaratonga azo hifantoka tanteraka amin'ny asa mitsangana ambonin'ny boky fampianarana tsy misy fanohanana, izay mampihena ny asa mafy, ary tsy mankeny ny fandrefesana fahadisoana vokatry ny vatan'olombelona ny hafanana taratra ny ambaratonga.
Ny ambany sy ny lafiny ny fanahy anivon'ny marina-zorony rafitra miaraka amin'ny halavany ny 2000mm, ary ny marina amin'ny ankapobeny (0.02-0.025) MG / m. Raha ny mpampiasa manana fepetra manokana, dia mety ho namboarina tsirairay. Ny zeroing firafitry ny fanahy ambaratonga tsy manam-paharoa, raha oharina amin'ny mahazatra rafitra: 1. Mora aotra. 2. Rehefa avy fanitsiana, ny aotra toerana Tsy mora ny fiovana. Araka ny hita ao amin'ny Figure 1. Rehefa V miendrika Groove ambany ny fanahy anivon'ny ary mihodinkodina manodidina ny fototra ho an'ny mpiray in-5, raha ny manjary miboiboika mifindra, dia afaka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny alalan'ny fanitsiana ny visy 2. teny efa nanitsy tao amin'ny orinasa ary tsy niova amin'ny ankapobeny.
Ny firafitry ny fanahy anivon'ny miovaova araka ny fanasokajiana. Ny toe fanahy karazana ambaratonga amin'ny ankapobeny ahitana ambaratonga lehibe ny fanahy ny vatana, ny sehatra marindrano, dia adiabatic tahony, ny ambaratonga lehibe, ny sarony takela sy aotra fitaovana fanitsiana. Ny mpanapaka ambaratonga amin'ny ankapobeny ahitana ny sehatra vatana, ny fonony lovia, ny lehibe sy ny ambaratonga aotra fitaovana fanitsiana.
Ny haavon'ny fanahy mampiasa ny fanahy haavon'ny ho toy ny fitaovana fandrefesana ny fandrefesana sy mamaky singa. Ny ambaratonga no voaisy tombo-kase fitaratra fantsona, ary ny longitudinal fizarana anatiny dia boribory ambonin'ny ambonin'ny Arc tamin'ny iray nipoaka ny curvature. Ny fitaratra fantsona ny ambaratonga dia feno ny ranon-javatra amin'ny ambany viscosity coefficient, toy ny toaka, Etera sy ny fifangaroana. Ny anjara tsy misy ranon-javatra dia matetika antsoina hoe ambaratonga fefy. Misy anankiray fifandraisana misy eo amin'ny nipoaka ny curvature ny longitudinal fizarana anatiny ambonin'ny fantsona ny fitaratra sy ny fizarana diplaoma sarobidy. Araka ny fifandraisana io, ny fisainan'ny norefesiny fiaramanidina azo refesina.
Post fotoana: Jan-09-2020
Tripod , Total Station , mpandray , Vh-525 dimy Line , Wall Bracket , 8-dalana, ary 4 marindrano-dalana ,